ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, December 31, 2008 No comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, December 31, 20082comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, December 27, 2008 No comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, December 25, 20082comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, December 23, 2008 1 comment:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, December 20, 2008 No comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, December 16, 20084comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, December 13, 20082comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, December 11, 2008 No comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, December 08, 2008 1 comment:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, December 04, 20082comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, December 03, 2008 1 comment:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, December 02, 20084comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, November 29, 20082comments:
မောင်လေး ဟန်သစ်ငြိမ်ရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ...
"Ten Things I Hate About Myself"
၁။ လူကဲခတ် ညံ့ဖျင်းခြင်း
၂။ လုပ်ချင်တာ သိပ်များနေခြင်း
၃။ လူတိုင်းကို ယုံကြည်စိတ်ရှိခြင်း
၄။ တစ်ယောက်ထဲ အလုပ်များနေခြင်း
၅။ သူတစ်ပါးကို အမြဲကူညီတတ်ခြင်း
၆။ လုပ်ချင်ရာကို မဖြစ်မနေ လုပ်တတ်ခြင်း
၇။ အပေါင်းအသင်း အရမ်းပဲ သံယောဇဉ်ကြီးခြင်း
၈။ သူတပါးမကျေနပ်လည်း မှန်ရာကို ပြောတတ်ခြင်း
၉။ မိမိ သိနေတာကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချတတ်ခြင်း
၁၀။ လူအများ၏ ဂရုတစိုက် အသိအမှတ်ပြုမှုကို လိုအပ်ခြင်း
လူ များကို ယုံကြည်၊ အလုပ်များ ကူညီတတ်ပြီး သံယောဇဉ်ကြီးသူ မိမိ၊ အားလုံးရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကို မျှော်လင့်နေပါတယ်။
မောင်လေး ဟန်သစ်ငြိမ်ရေ... ရေးတတ်သလို စိတ်ထဲရှိတာ ချရေးလိုက်ပြီနော်။
အမလည်း ပြန်တက်ဂ်လိုက်မယ် ကဲ ဘယ့်နှယ့်လဲ
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, November 26, 20084comments:
> Life is an opportunity, benefit from it.
> ဘ၀ဆိုတာ အခွင့်အရေး... အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပါ...
> Life isabeauty, admire it.
> ဘ၀ဆိုတာ အလှတရား... လေးစားပါ...
> Life isadream, realize it.
> ဘ၀ဆိုတာ အိမ်မက်.... လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ပါ..
> Life isachallenge meet it.
> ဘ၀ဆိုတာ စိန်ခေါ်မှူ... ရင်ဆိုင်ပါ...
> Life isaduty, complete it.
> ဘ၀ဆိုတာ တာဝန်... ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပါ...
> Life isagame, play it.
> ဘ၀ဆိုတာ ကစားပွဲ... ကစားပါ...
> Life isapromise fulfill it.
> ဘ၀ဆိုတာ ဂတိ... ဖြည့်ဆည်းပါ...
> Life is sorrow, overcome it.
> ဘ၀ဆိုတာ ၀မ်းနည်းမှု... ကျော်လွှားပါ...
> Life isasong, sing it.
> ဘ၀ဆိုတာ သီချင်း... သီဆိုလိုက်ပါ....
> Life isastruggle, accept it.
> ဘ၀ဆိုတာ ရုန်းကန်မှု... လက်ခံပါ....
> Life isatragedy confront it.
> ဘ၀ဆိုတာ အလွမ်းဇတ်လမ်း... ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ...
> Life is an adventure, dare it.
> ဘ၀ဆိုတာ စွန့်စားခန်း... ရဲရင့်လိုက်ပါ...
> Life is luck, make it.
> ဘ၀ဆိုတာ ကံကောင်းမူ... ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ...
> Life is life, fight for it.
> ဘ၀ဆိုတာ ဘ၀... ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ပါ...
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, November 23, 20085comments:
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ရှိ ခပ်ငယ်ငယ် ရူပဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းဌာန (CERN) တစ်ခုမှ Web ကို မွေးဖွားပေးလိုက်ပါတယ်။ ကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုပေါ်တွင် document များကို သက်ဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု Link များနှင့်အတူ 'hypertext' process ကို အသုံးပြုပြီး information management system တစ်ခုကို ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Tim Berners-lee က ပထမဦးဆုံး ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူနှင့်အတူ Robert Cailliau တို့သည် Web ၏ မူလပုံကြမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်ကာ တင်ပြပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အများ၏ လက်ခံဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်လာသော Web ၏ အစပိုင်း နှစ်အတော်ကြာအထိ Webpage များမှာ text ဖြစ်သာ ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့် ရေတွက်မယ်ဆိုရင် Websever ၅၀ ခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Web ကြီးထွားမှု အရှိန်အ၀ါကိုလည်း ၁၉၉၂ ခှုစ်မှ စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံး graphical browser (NCSA Mosaic) ကို စတင်မိတ်ဆက်လာခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ထိုအချိန်မှစပြီး သုတေသနလုပ်ငန်း အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြင်ပမှာရှိတဲ့ ထုထည်ကြီးမားတဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေ ရှိလာစေနိုင်သော mass media ကို ရောက်ရှိသွားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ကိစ္စအ၀၀ကို Massachusetts Institute of Technology (MIT) မှာရှိတဲ့ အပျော်တမ်း ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ World Wide Web Consortium (W3C) အမည်နှင့် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာလိုပါက www.inria.fr/Actualites/ cailliau-fro.html ဒါမှမဟုတ် wdvl.com/internet/history သို့မဟုတ် www.w3c.org/history.html တို့မှာ ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း.....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, November 23, 2008 1 comment:
ဒီပိုစ့်လေးက ကျွန်မ တင်ပြီးသားပိုစ့်လေးပါ။ ကိုယ့်ဘာသာရေးပြီး အရမ်းသဘောကျခဲ့မိပါတယ်။ အားလုံးကိုလည်း ယုံကြည်တယ်လေ။ တစ်နေ့တစ်ချိန်ကျရင်.....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, November 22, 20083comments:
ကြုံတွေ့နေရတာ မဟုတ်ကြောင်း သိထားစမ်းပါ....
စွန်တစ်ကောင်ဟာ လေဆန်ကို ပြန်ပြီး
အဆိုးဆုံး အခက်အခဲတွေ့ ရင်
ငါလည်းဘဲ သူလို နေနိုင်အောင် ကျင့်ရမယ်လေ....
ဒုက္ခကို ခံနိုင်တဲ့ သတ္တ၀ါတစ်မျိုးပါ
သူများတွေ ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခတွေနဲ့ယှဉ်ပြီး
ငါ့ဒုက္ခတွေဟာ သာမညလို့ မပြောနိုင်ဘူး
သူများက ဘ၀ကို တွယ်တာပြီး
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, November 21, 2008 No comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, November 21, 2008 1 comment:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, November 18, 20083comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, November 16, 20082comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, November 15, 20084comments:
ဘာလိုလိုနဲ့ လွတ်ကျသွားတဲ့ မြို့တော်နဲ့အတူ
ဘ၀နိဂုံး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မြို့စားကြီးတစ်ယောက်
မြို့တော်ကြီးကို တကယ်ပဲ ကျောခိုင်းသွားခဲ့လေသလား...
ကြုံသမျှ ဘ၀၀ဋ်ကြွေးအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါ မြို့စားကြီးရေ....
နှစ် ၂၀ ဆိုတဲ့ အချိန်အတိုင်းဟာ
လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်ကြီးကို ပြန်လည်မွမ်းမံမယ့်အချိန်
(လွတ်ကျခဲ့သော မြို့တော်ကြီးကို တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ မောင်လေး နေဘုန်းလတ်ရေ... နှစ် နှစ်ဆယ်ဆိုတဲ့အသံထက် နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အသံကို ပဲ နားထဲမှာ ပင့်တင်သံကြားယောင်နေမိတော့တယ်။ ၀ဋ်ကြွေးရှိရင် ကျေပါစေလို့ ရွှေမြန်မာမှ ဆုတောင်းနေပါတယ်။)
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, November 14, 2008 No comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, November 10, 20082comments:
မစင်ကြယ်သော အတွေးအကြံစိတ်ကို လိုက်သူသည်
ယခုဘ၀ရော နောက်ဘ၀ပါ နှစ်ဘ၀လုံး
ကြီးမားစွာ ဆင်းရဲပူပန်ရမည်သာ ဖြစ်၏။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, November 07, 20082comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, November 03, 20082comments:
ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုတာ မစဉ်းစားချင်
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, October 30, 20084comments:
ဦးဝသုန် ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘ၀မှ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ......
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, October 27, 2008 No comments:
ဦးညိုလှရယ်၊ ဦးတင်မောင်မြင့်ရယ်.... ခုလည်း ဦးဝသုန်ရယ်... သူတို့ချစ်တဲ့ အနုပညာကို ကျောခိုင်းသွားခဲ့ကျပြီနော်။
စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ ဦးဝသုန် ကွယ်လွန်သွားခြင်း
၁၉၄၇ - ၂၀၀၈
ပန်းချီဝသုန်ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသည်။ အဖ ဦးလှမောင်၊ အမိ ဒေါ်သန်းတို့၏ မွေးချင်းသုံးယောက်အနက် အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်။ အမည်ရင်း မောင်ခင်လှဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ ကန်တော်ကလေးဇာတိ ဖြစ်သည်။ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တွင် ကာတွန်း ဦးမောင်လွင် (ငထက်ဖြား)၊ ကာတွန်းဝင်းမောင်တို့ထံမှ ကာတွန်းပညာလေ့လာဆည်းပူးခဲ့သလို ပန်းချီဆရာ ဦးညိုလှထံတွင် ပန်းချီပညာကို သင်ကြားခဲ့သည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ပန်းချီပန်းပုကျောင်းသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၇ - ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ပန်းပုသင်တန်း ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ မှ ၇၀ ခုနှစ်အတွင်း ကာတွန်းပေါက်စ မောင်ခင်လှ အမည်ဖြင့် ကာတွန်းလုံးချင်းများ ရေးဆွဲထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် လျှို့ဝှက်သည်းဖိုမဂ္ဂဇင်းတွင် သရုပ်ဖော်ပန်းချီ စတင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်ခါနီးအချိန်အထိ စာနယ်ဇင်းသရုပ်ဖော်ပန်းချီများ၊ မျက်နှာဖုံးပန်းချီများ ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်မျက်မှန်မဂ္ဂဇင်းတွင် သားလေးအမည်မသိ ၀တ္ထုတို စတင်ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ချစ်ဦးညို၏ လင်္ကာဒီပချစ်သူဝတ္ထုကို ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းမှာ ၃၆ လတိုင်အောင် အခန်းဆက်ရုပ်ပြရေးဆွဲခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ဆရာရန်ကုန်ဘဆွေထံမှ ပါတိတ်ပန်းချီ ရေးဆွဲနည်းကို သင်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာ လူထုဦးလှ၏ လှောင်ချိုင့်အတွင်းမှ ငှက်ငယ်များ ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ THE CAGED ONES အမည်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထုတ်ဝေရာတွင် မျက်နှာဖုံးနှင့် အတွင်းသရုပ်ဖော်ပန်းချီများ ရေးဆွဲပေးခဲ့ရသည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် UNICEF မှ ကမ္ဘာ့ကလေးသူငယ်များ ရန်ပုံငွေအဖြစ် ပို့စကဒ်ပြက္ခဒိန်ထုတ်ဝေရာမှာ ကြာပန်းများ (Lotus) အမည်ရှိ ရေဆေးပန်းချီကား ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၃ - ၈၀ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပန်းချီပန်းပုကောင်စီ တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
မိုးမိုး(အင်းလျား) အမှတ်တရ ၀တ္ထုတိုပြိုင်ပ္ပွဲ၌ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် မိုနာလီဇာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း ၀တ္ထုတိုဖြင့် ဒုတိယဆုရရှိခဲ့သလို ၁၉၉၉ နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်များတွင်လည်း မနက်ဝိဇ္ဇာ ညမိစ္ဆာ၊ သောကဗျာပါဒ အရေးအကြောင်းများ ၀တ္ထုတိုများဖြင့် အထူးဆု ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် သားကလေးအမည်မသိနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ စာအုပ်ကို သီဟရတနာစာပေတိုက်မှ ထုတ်ဝေ၍ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မုဒိတာရေစင်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ကို ပုဂံစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ပန်းချီရေးသက် နှစ် ၃၀ ကျော်အတွင်း ပါတိတ်ပန်းချီပြပွဲများကို ၄ ကြိမ်တိုင်တိုင် ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် တစ်ကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲ၊ ပြည်ပပန်းချီပြပွဲများအဖြစ် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၌ တောင်ကိုရီးယား၊ ဆိုးလ်မြို့၌ လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၌ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဖီလဒယ်လ်ဖီးယားတို့တွင် ပါဝင်ပြသခဲ့သည်။
ပန်းချီဝသုန်၏ ပန်းချီကားများကို အမျိုးသားပြတိုက်၊ စိုက်ပျိုးရေးပြတိုက်၊ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးရုံး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပြခန်းများနှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ပန်းချီမြတ်နိုးသူများက ၀ယ်ယူစုဆောင်းပြသထားရှိသည်။
ပန်းချီဝသုန်၏ နေထိုင်မှုအနုပညာကို တင်ပြထားသည့် Sketch of Wathone အမည်ဖြင့် ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင် ရိုက်ကူးသော ဇာတ်လမ်းတို ရုပ်ရှင်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ National Geographic Magazine မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော All Roads Films Festival ၌ ပထမဆုအဖြစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလဆန်း၌ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြည်ဖြူသျှင်က ဦးဝသုန် ကျန်းမာရေးကောင်းလာရင် ဧည့်ခံပွဲလုပ်မည်လို့ အားလုံးကို ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်......
နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ပန်းချီဝသုန်သည် စာနယ်ဇင်းသရုပ်ဖော်ပန်းချီများ၊ ရသပန်းချီကားများ ရေးဆွဲခြင်း၊ ၀တ္ထုတိုရေးသားခြင်းများ ပြုလုပ်နေဆဲ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက် (အင်္ဂါနေ့) နံနက် ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
ဦးဝသုန်ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီး ဒေါ်စမ်းအေး၊ သားသမီး (၄) ဦးဖြစ်ကြသော ကိုငြိမ်းအေး၊ မစံပယ်ဖြူ၊ မောင်မျိုးထွန်း၊ မအင်ကြင်းမွှေးနှင့် မြေး မြူမင်းသုန်၊ ဟင်္သာငြိမ်းအေးတို့ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကျွန်မ သိရသလောက်တော့ ဦးဝသုန်ဟာ သူ့ရဲ့ပန်းချီနဲ့ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လူသာ သေသွားခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ အနုပညာဟာ ဘယ်တော့မှ သေမှာမဟုတ်တဲ့အပြင် သူ့နာမည်ဟာ ၀န်းကျင်အနှံ့ ပျံ့နှံ့နေဦးမယ်လို့ ကျွန်မ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဦးဝသုန်ရဲ့ လက်သုံးစကားလေးတွေကို ဆက်လက်တင်ပြပါဦးမယ်။
စစ်မှန်သည့် ပန်းချီသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာရန် မည်သည့်ရာထူး၊ ငွေကြေး၊ အရှိန်အ၀ါ၊ ပကာသနတို့နှင့်မျှ လုပ်ယူ၍မရ၊ အနုပညာအပေါ် ရိုးသားစွာ သစ္စာရှိဖို့ လိုအပ်သည်။
(ပန်းချီဝသုန် ဘ၀နှင့် လက်ရာများ လေ့လာချက် ဘွဲ့ယူစာတမ်းမှ)
လူချမ်းသာဖြစ်ရန် လမ်းကိုလည်း ရွေးချယ်ခဲ့သူ မဟုတ်ပါ။
ဘ၀ကို ပန်းချီနှင့် တည်ဆောက်၊
(မေတ္တာလက်ဆောင်စာပေ၊ ၁၉၉၈ မေလ၊ ကြီးပွားရေးလမ်းညွှန်ဂျာနယ်)
အိမ်တွင် ကျွန်တော်၏ ပန်းချီကားများသာမက
ကျွန်တော့်ကို ချစ်၍ ပေးထားရစ်ခဲ့သော
(ဖုန်၊ ၁၉၉၈၊ စက်တင်ဘာလ၊ မြားနတ်မောင်မဂ္ဂဇင်းမှ)
"မိုးရွာတုန်း ရေခံပါလား၊ ရေခံပါလား" ဆိုသည့်
အသံများ နားထဲမှာ ကြားပါလျက် မသိကျိုးကျွံနေမိတယ်။
မိမိ လက်မှတ်ထိုးတာဝန်ယူရမည့် အလုပ်ကို
ကျွန်တော် ရိုရိုသေသေပဲ တစ်လျှောက်လုံး လုပ်ရမယ်။
လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အလုပ်က ရုပ်ရှင်၊ ပြဇာတ် မင်းသားတွေ၊
နေစရာ၊ စားစရာ အသင့်အတင့်ဆိုလျှင် တော်ပါပြီ။
ကျွန်တော် လောဘတကြီး ရှာဖွေနေသည်မှာ
အဲဒါကိုပဲ ကျွန်တော် ပျော်မောနေ.....
(ခြေထောက်များ၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ မဟေသီမဂ္ဂဇင်းမှ)
လောကမှ ပညာတတ် အသိပညာရှိ အနုပညာနဲ့ နိုင်ငံ့အကျိုးပြုသော သူများ ဘာကြောင့် စောစောသွားကြရတာလဲ.....
ဦးဝသုန်ရေ..... ရောက်ရာ ဘုံဘ၀မှာ အနုပညာနဲ့ ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေမယ်လို့ ကျွန်မ မြင်ယောင်နေမိပါတယ်။
ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘ၀သို့ ရောက်ရှိ ခံစားစံစားနိုင်ပါစေလို့ မေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်။ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ.........
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, October 25, 2008 1 comment:
ငါ့ကို လှောင်ပြုံး ပြုံးနေတာလား...
ဟန်ဆောင် မချိပြုံး အခါခါပြုံးရင်း
ဘယ်အရာမဆို ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရင်း
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, October 23, 2008 1 comment:
ကျွန်မ ဆိုက်ဒ်လေးကို ပစ်ထားခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ရေးစရာတွေ ခေါင်းထဲမှာ ရှိပေမယ့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ကျွန်မ ဆိုက်ဒ်လေးကို ဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ တွေးခဲ့မိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ မောင်လေး ဟန်သစ်ငြိမ်က ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လာ Tag ပြန်ရော... အင်း ပြောရရင်တော့ ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆို ပြန်ရေးမှ ကောင်းမယ်လို့လည်း သိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လားလား တစ်ခါမှ မတွေးဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သွားတွေ့ရတော့တာပါပဲ။ ရေးရမယ့်အကြောင်းက ဘာလဲဆိုတော့ ''အချစ်ဆိုသည်မှာ" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးသားရမယ့်ဆိုပဲ။ အဲဒါမှ ဒုက္ခပဲ။ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖူးတဲ့အကြောင်းအရာ ရေးရမယ့်ဆိုတော့ မရေးတာပဲ ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ တွေးမိပြန်ရော။ ဒါနဲ့ မောင်လေးသင်ကာကို ပြောတော့ သူက ကျွန်တော် ရေးသလိုပြန်ရေးပေါ့တဲ့။ သူ့အချစ်ဆိုသည်မှာကို ဖတ်လိုက်ပြန်တော့ ဘယ့်နဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာကလည်း ခေါင်းစဉ်က မှားနေတာပဲ အရည်ဆိုသည်မှာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတာပဲ။ ခက်တာက ဒီအရည်ဆိုသည်မှာကိုလည်း မရေးတတ်ပြန်ဘူး။ ခက်တော့ ခက်နေပြီ။ ဖိတ်ထားတော့လည်း ရေးဖို့ အကြွေးတင်နေပြန်တယ်။ မရေးပြန်တော့လည်း မကောင်း။ ကိုယ့်မောင်လေးက တကူးတက သတိတရ ဖိတ်ထားတာဆိုတော့ ရေးမှကောင်းမှာပေါ့။ ဘာရေးရင် ကောင်းမလဲဆိုတာ တော်တော် အချိန်ယူစဉ်းစားရတယ်။
ကဲ ဒီတော့ မတတ်နိုင်ဘူး။ သိသလောက်ပဲ ချရေးလိုက်တော့မယ်။ ဖိတ်ထားတာ နည်းနည်းကြာသွားတဲ့အတွက်လည်း တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်နော်။
"Love in the heart is better than honey in the mouth"
အဲ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော် "And remember, the surest way to win love is to give love." သိထားဖို့က မေတ္တာကိုရဖို့ အသေချာဆုံးလမ်းဟာ မေတ္တာကို ပေးဖို့ပါပဲ။
"where there is love, there is life. Hatred leads to destruction. အချစ်ရှိလျှင် ဘ၀ရှိ၍ အမုန်းတရားသည် ပျက်စီးခြင်းကို ဦးတည်သည်တဲ့။
ကျွန်မမြင်မိတာကတော့ "lowe isafervent fire" အချစ်ဆိုတာ ပြင်းထန်တဲ့ မီးတောက်မီးလျှံပဲ။
အင်း မရေးလည်း မရေးတတ်ပါဘူး။ ရေးချင်တာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ အချစ်အကြောင်းကို လေ့လာပြီးမှပဲ ဆက်ရေးတော့မယ်မောင်လေးသီဟန်ရေ.... ဟီးဟီး
L.... lake of Sorrow (၀မ်းနည်းပူဆွေးရေအိုင်)
O.... Ocean of Tears (မျက်ရည်သမုဒ္ဒရာ)
V.... Valley of Death (မရဏတောင်ကြား)
E... End of Live (ဘ၀နိဂုံး) ပါတဲ့...... ဟုတ်တယ်ဟုတ်... မဟုတ် ဟုတ်ဟုတ်.... ဟုတ်
ငိုလို့မဆုံးတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ..... ပေါ့
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, October 19, 20085comments:
ဒီနေ့သည် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ နောက်တစ်မျိုးက အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတော်စင် သူတော်မြတ်အပေါင်း သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ.....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, October 14, 2008 No comments:
၁၄၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ရက်နေ့သည် မြန်မာများရဲ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (အဘိဓမ္မာနေ့) ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, October 13, 2008 1 comment:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, October 13, 2008 No comments:
Amusements, but not happiness
Acquainces, but not friends
Servants, but not faitnfulness
Religion, but not salvation
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, October 05, 2008 No comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, October 02, 2008 No comments:
Taungbyone Net Festival
Whe : Fullmoon Day of Wagaung (Augus 19)
The most famous of the Nat(supernatural beings that reward believers) festivals in Myanmar. This event is visited by all those who worship Nat, especially the traders and merchants who want help for more profits!
Where : ratanagu pagoda, Amarapura Township
When : 8th Waxing Moon Day of Wagung (August 27)
Manuha Temple Festival
When : Day before and day of the Full Moon of Tazaungmon (November 14 and 15, 2005)
Donating rice to monks, free rice cakes to all and papier macxhe figures.
When : The Dawn of the Fullmoon Day of Thadingyut (October 17, 2005)
One of the most famous Pagoda festivals,4Buddha Images are carried around the villages of the lake onahuge golden barge towed by hundreds of legrowers.
Elephant Dnace Festival
Where : Kyaukse, Mandalay Divison
When : Fullmoon day of Thadingyut (October 17)
When : The Whole month of the Myanmar month of Tazaungmon (November)
When : One week before the Fullmoon of Tazaungmoon to Fullmoon day (Noverber 8)
Pagoda in the abode of the Celestial Beings by Sending up lighted hotair ballons. Now this traditional is combined withacompetition to send up the most elaborate and beautiful ballons of every shape and size.
When : Fullmoon night of Tazaungmon (Novermber 15)
The people of Taunggyi and its environs march through the town with decorated floats and lighted candles to the Sulamuni Pagoda at the adge of the town.
Where : All over the country; Shwedagon Pagoda
When : Fullmoon of Tazaungmoon (November 15)
An all - night weaving competition takes place at the Shwedagon Pagoda, on the night berfore the Fullmoon Day.
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, October 01, 2008 No comments:
အခုတစ်လော blog တွေ၊ wiki တွေ အပြင် ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတွေနဲ့ အုပ်စုတွေ၊ website တွေ တိုးတက်များပြားလာတာကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ တွေ့ရှိလာရပါပြီ။ ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူငယ်လူရွယ်တွေ အချိန်ကို အလဟဿ မကုန်ဆုံးဆောင် အသုံးချတတ်လာကြပြီလို့ မှန်းဆလို့ ရပါတယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်လည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်အခြေအနေမှာ နည်းပညာတွေ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ အသစ်အသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာနေချိန်မှာ ကျွန်မတို့တစ်တွေဟာ ခေတ်နောက် ပြတ်ကျန်လို့မရပါဘူး။ မီဒီယာစတိုင်သစ်တွေနဲ့အတူ တတ်နိုင်သရွေ့ ရှေ့ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာပါပဲ။ နောက်ပိုင်း blog တွေ များပြားလာတာနဲ့အမျှ အများရဲ့အမြင်မှာ ကွဲပြားခြားနားစွာ မြင်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
blog တွေဟာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းအတွက် ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်၊ ကိုယ်ပိုင်တွေ့ရှိချက်၊ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ အနုပညာတွေ၊ နည်းပညာ ဗဟုသုတတွေ၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အားလုံး အားလုံး လက်လှမ်းမီသလောက် ၀ါသနာအရင်းခံပြီး ဖြန့်ဝေနေကြတာဟာ အလွန်တရာ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းရှိသလို၊ လူမှာလည်း လူ့စည်းကမ်းရှိသလို ဘလောဂ့်တွေမှာလည်း ဘလောဂ့်စည်းကမ်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဘလောဂ့်ဂါတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူရပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့သတင်း၊ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၊ မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာ ဒါတွေဟာ တိကျမှန်ကန်မှုရှိမှသာ ကိုယ့်ဘလောဂ့်မှာ တင်ပြကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသာစေ သူ နာစေဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးက ရေရှည်မှာ တည်မြဲမှု မရှိရုံမျှမက ဘလောဂ့်ဂါ အများကိုလည်း ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့စေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘလောဂ့်ဂါတိုင်း နားလည်လက်ခံသဘောပေါက်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အမြင် သူ့အမြင် ဖလှယ်ခြင်းဟာလည်း ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ အောင်မြင်တိုးတက်မယ့် တက်လှမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပ ဘလောဂ့်ဂါများ နေရာအနှံ့အပြားမှာ များပြားနေတာကို တွေ့ရှိခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေလည်း ဒီလို မီဒီယာအသစ်တွေ အများအပြား တိုးတက်စေချင်တာ အမှန်ပါ။ ဘလောဂ့်ဂါအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီပြီး ပြည်ပ မီဒီယာသမားတွေ ကိုယ့်ဝန်းကျင်းအတွင်း မ၀င်လာနိုင်အောင် အားလုံးကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံသား ဘလောဂ့်တွေကို လေ့လာမိသလောက် ဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ဘလောဂ့်တင်ခြင်းကို ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့ ပုံစံသစ်တစ်မျိုးအဖြစ် ရှုမြင်ကြပြီး ကျန် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကတော့ ယင်းသို့ မယူဆပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ နောက်ပြီး မိမိတို့ဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာဖြစ်စေ၊ မကြာခဏဖြစ်စေ မိမိတို့သတင်းမှာ ဖော်ပြမယ့် အချက်အလက်တွေရဲ့ မှန်ကန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးအတည်ပြုဖို့အတွက် အချိန်ပိုပေးပြီး လုပ်ကြတယ်လို့ ဆိုသူ အရေအတွက်ကတော့ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဘလောဂ့်ဆိုတာနဲ့ တစ်ခုထဲသော အကြောင်းအရာကို မမြင်စေချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရေးသားချက်ကို ကိုယ်တာဝန်ယူရပါမယ်။ ဘလောဂ့်ဂါ တော်တော်များများ အင်း ပြောရရင်တော့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ သတင်းတွေကို အွန်လိုင်းတင်ရာမှာ သူတို့ရဲ့ အမည်ဝှက်ကိုသာ ဖော်ပြကြပါတယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, September 24, 2008 1 comment:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, September 21, 2008 No comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, September 10, 2008 1 comment:
လာလည်ကြသော သူများအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, September 10, 2008 No comments:
စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့သည် စာတတ်မြောက်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, September 08, 2008 No comments:
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စာတတ်မြောက်ရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂပညာ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ ( ယူနက်စကို) က ကြီးမှူးပြီး အီရန်နိုင်ငံ၊ တီဟီရန်မြို့တွင် နိုင်ငံတကာ စာတတ်မြောက်ရေး ကွန်ကရက်ကို ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံပေါင်း (၈၉) နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကွန်ဂရက်ကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၉ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ကို နိုင်ငံတကာ စာတတ်မြောက်ရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါတယ်။
စာတတ်မြောက်ရေးနေ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က စာမတတ်သူ ပပျောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံအသီးသီး ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် စာမတတ်သူ လျော့နည်းပပျောက်ရေးအတွက် အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်ကြရန်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခုထိ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ကို စာတတ်မြောက်ရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး နှစ်စဉ် ကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်။
ဟိုကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စာမတတ်သူ ပပျောက်ရေးအတွက် ကျေးရွာ တောရွာတွေ ကွင်းဆင်းရပါတယ်။ ကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်တွေမှာဆိုရင် ကြားတော့ ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မအရမ်းကြိုက်တဲ့ ကားတစ်ကားရှိတယ် ကားနာမည်က ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယျာဉ်မှူးတဲ့။ အဲဒီကားထဲမှာ အံ့ကျော်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံက အရမ်းပီပြင်တယ်။ အရမ်းလည်း သဘောကျတယ်။ ပြီးတော့ ဗဟုသုတလည်းရတဲ့ကားတစ်ကားပဲ။ စာတတ်မြောက်ရေးအတွက် ဘယ်လိုဆိုတာ နားလည်ခဲ့ရတယ်။ ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လွယ်လွယ်သင်လို့ရတာ မသင်ချင်ကြတဲ့ ကလေးတွေတော်တော်များများကို တွေ့ရတာ စိတ်မကောင်းစရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း တတ်စွမ်းသမျှ ကိုယ့်ဝန်းကျင်က သူတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်စေချင်ပါတယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, September 08, 2008 1 comment:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, September 05, 20082comments:
သြဂုတ် ၃၁ ရက်နေ့ သည် ကမ္ဘာဘလောဂ့်ဂါများနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမြန်မာသည်လည်း ဘလောဂ့်ဒေးနှင့်အတူ ၂၀၀၆ မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်သို့ တိုင်ခဲ့ပါလေပြီ။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, August 31, 2008 No comments:
မြန်မာအင်ဖိုတက်တွင် လုပ်မည့် အစီအစဉ် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းထားပါကြောင်း
Time: August 31, 2008 from 9am to 4pm
Location: Conference Hall, MICT Park
Organized By: MBS
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, August 24, 2008 No comments:
World Blog Day Seminar
"သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မည် World Blog Day အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် MBS (Myanmar Blogger Society) အဖွဲ့ဝင် Blogger တွေ ဦးစီးပြုလုပ်မယ့် Seminar တစ်ရပ်ကို 2008 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့ MICT မှာ နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Seminar အမည်ကိုတော့ "Socialization on Net" လို့အမည်ပေးထားပြီး မြန်မာ Blogger များရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Seminar ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲကို ပြည်တွင်းမြန်မာဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှု၊ ပြည်ပမြန်မာ ဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တို့ဖြင့် စည်းစည်းလုံးလုံး ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Social Networking နဲ့ Blogging တို့ကို အခြေခံပြီး အများအကျိုး၊ နိုင်ငံ့အကျိုး သယ်ပိုးနိုင်တာတွေ၊ စီးပွားရေး ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် နိုင်တာတွေ၊ ပညာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တာတွေ၊ Global ရေစီးကို ပိုမိုလျင်မြန်အောင် စီးဆင်းနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေကို မြန်မာ ဘလောဂ့်ဂါ လူငယ်များမှ ဟောပြောပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MBS ရဲ့ အနာဂတ် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပါ ပြောကြားပေးမှာ ဖြစ်ပြီး Guest Speaker တစ်ဦးကိုလည်း ဖိတ်ကြားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်ရှင်။
ဒီ စီမီနာ အခမ်းအနားလေးကို အိုင်တီ၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အစရှိတဲ့ နယ်ပယ် အသီးသီးကလူတိုင်းအတွက် ရည်ရွယ် ဟောပြောပေးမှာ ဖြစ်လို့ လူတိုင်း မလွတ်တမ်း လာရောက်နားထောင်သင့်တဲ့ ဟောပြောပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Social Networking နဲ့ Blogging တို့မှ ရရှိလာမယ့်၊ ဖန်တီးယူနိုင်တဲ့ အခွမ်းအလမ်းတွေဟာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ အဲဒီနေ့မှာပဲ လာရောက်နားထောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်" တဲ့။
လာဖြစ်အောင် လာခဲ့ကြဦီးနော်။ တွေ့ဆုံကြမယ်............
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, August 23, 2008 1 comment:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, August 20, 2008 1 comment:
ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိုစ့်ရေးခြင်းကို ရပ်နားထားပါတယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, August 10, 2008 No comments:
နာဂစ်မုန်တိုင်း နဲ့ အတူ သေဆုံးသွားတဲ့ ဘ၀တွေ ကျန်ရစ်သူ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် လေးဖြူ၊ မျိုးကြီး၊ ဆုန်သင်းပါရ်၊ ဟယ်ရီလင်း စတဲ့ အဆိုတော်တွေတော်တော်များများ ၀မ်းနည်းပက်လက် သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ၀ိုင်းဝန်းပြီး ယမင်းတို့လည်း ကူညီခံစားလိုက်ရအောင်နော်....